Esanda kutholakala, Russian Federation wethula uhlelo ukuqoqwa othomathikhi izimali ezivela abanikazi lorries ezinesisindo esingaphezu kwamakhilogremu angu-12 wamathani njengoba isinxephezelo for umonakalo babangela kwamanzi komgwaqo. Le migwaqo "uPlato", okuyinto lethiwa akuyona yokudumisa sazi omkhulu, futhi ngokunciphisa "intengo tonne ngalinye," kusuka ngesikhathi kwethulwa kuye kwavusa impikiswano eshubile. Yiziphi izici zohlelo futhi siyini isimiso umsebenzi walo?
"Platon" uhlelo: kuyini?
Freight izimoto, kuncike ohlelweni abe mass esilingana noma amathani angaphezu kwangu-12. Ukuze ukunyakaza lwezokuthutha othelawayeka wezwe federal lizokhokhiswa. "Platon" has database yayo siqu, okuyinto wenza izimoto abayizithulu abangaphezu kwezigidi ezimbili futhi ezingaphezu kuka-51 eziyinkulungwane emakhilomitha endleleni. Ukwethulwa esemthethweni ohlelweni senziwa ngenyanga kaNovemba ngonyaka owedlule.
Uhulumeni njengoba main "uPlato" opharetha ukhethe inkampani "PT-Invest" TC. Ngemva kwezingxoxo ne-Federal Road Agency, kwanqunywa ngaleso yokugibela ukuthi ezi- ngesimo "phambi pay" kanye uhlelo okuzenzakalelayo.
Injongo eyinhloko uhlelo - ekuthuthukiseni isimo endleleni kwemigwaqo federal kulo lonke elaseRussia. Minyaka yonke, lokhu kwadala umonakalo kakhulu ngenxa yezinto izimoto zabo isisindo idlula amathani 12. "Platon" uhlelo isetshenziswa njengoba isisekelo sesimiso esisha ezayo, okuyinto Kuzoze kube 2020. Ukuyeka kungenzeka ukubuyiselwa komzila womgwaqo, kungashiwo indawo ngokuphelele ngaphandle asebenzise izindlela kwesabelomali sikahulumeni.
Kunezindlela eziningana ukukhokhisa intela imali abashayeli onendlu simiso "uPlato." Kuyini futhi ngiphatha kanjani ukukhokha travel on imigwaqo kahulumeni?
Intuthuko. Imali eyenziwe ngqo ngaphambi kokuthumela zindiza. Ungenza isamba sonke njengoba uhambo ngalinye, futhi ukuze ezimbalwa ezizayo.
Ukuze amakhilomitha lidlule. I elula kunazo yokukhokha, njengoba akusho ngokweqile. Ngaphambi Ukuhamba ithrekhi ngamunye wenze inkokhelo. "UPlato" futhi inikeza indlela esiwusizo - ukufakwa idivayisi ekhethekile gumbi imoto. Nokho, ukuxhumana kwe-computer ugibelile , kukhona nemibi. Eyokuqala - ukulawula okuqinile ibanga simboziwe. Esesibili - imoto ngokuxhumanisa uhlelo GLONASS satellite, esihambelana naso, ukulawula ngamaphoyisa omgwaqo.
Uhlaka Esinanyathiselwe. Bayingxenye le "Platon" uhlelo. umgwaqo Federal uya khona ifakwe ukuthandwa kagesi uhlobo imiklamo ukuthi lifunde ulwazi kusuka edabula imoto yabo futhi ubhale off ethile imali ku-akhawunti siqu umshayeli. Ukuze wenze lokhu, yebo, ukubhaliswa oyisibopho "Platon" uhlelo futhi khona ikhodi ekhethekile electronic ukuthi lifundwa futhi uzimele.
Uma gcwalisa iloli ukwenza kusengaphambili inqubo yokubhalisa kanye nemizila traffic njalo, inqubo efanayo Kwenziwa kanje:
Kunoma sokusekela ikhasimende base ngosizo abasebenzi bakhe.
Ukugcwalisa ifomu ekhethekile futhi akhawunti bhalisiwe ngokusebenzisa i-akhawunti yakho ku-Platon.ru.
Idivayisi ugibelile ukufakwa kumakhabheni izimoto, usebenza ngokuzenzakalelayo ngokugcwele.
Ukubhalisa in the "Platon" uhlelo
Ekuqaleni, kufanele abanikazi izimoto bezentengiselwano kubhaliswe. Ulwazi egciniwe kangenanga kuphela ikhasimende, kodwa yayihlanganisa nokuthi imoto yayo. Le nqubo kungaba kwenziwe nge website Platon.ru. Ngemva ukugunyazwa kuqedile umsebenzisi uzothola iphasiwedi elakhiwe futhi ngemvume. Ku-akhawunti yakho siqu kumelwe ucacise i-akhawunti yakho futhi wenze kube imali. Ukwenza Balazwe usungaqala ngokushesha ngemva yemali.
Lapho senza izimali Balazwe asuswe akhawunti yomnikazi imoto uma bhalisiwe ohlelweni kaPlato. Ukuze ukhokhele umzila ekhethiwe zingenziwa ngqo uthumele izimali kwesitatimende-akhawunti yasebhange khona imininingwane. inqubo enjalo kusho evulekile. Ngaphezu kwalokho, kukhona kungenzeka ukukhokha nge-credit card, futhi lokhu awasebenzi kuphela terminals, kodwa futhi kumafomu yokukhokha ku-akhawunti yakho, kanye nezicelo mobile.
Inani zokukhokha izimoto ezinkulu-tonnage
Ngemva izitatimende eziningi ngokumelene "uPlato" tariff ngoba ikhilomitha elilodwa on imigwaqo federal kushintshiwe futhi iqinile ezingeni ruble 1,5293. Inani langempela kwaba kuze kube sekupheleni Februwari 2016. Ngaphambili, ingamaphesenti 3,73 ruble ikhilomitha komgwaqo ngayinye. Nokho, ukwehla enanini layo isikhathi esilinganiselwe, eziqala inkokhelo Mashi 2016 lenyuka cishe kabili futhi zaba ruble 3.06, manje-ke izohlala ingashintshiwe kuze kube sekupheleni 2018.
Kuqhathaniswa efanayo tariff amazinga emazweni ase-European efana Russia kuba aphansi. Ngokwesibonelo, eBelarus, yokugibela ngenxa yombuso injongo emizileni yilezi kasithupha. Kuqhathaniswa tariff Austrian Russian ngezansi izikhathi ezingamashumi amabili.
Indlela ukwandisa yamanani nomthelela ekwandeni amanani kuleli zwe
Ukuthola uhlelo "uPlato", bayaluzisa Russia: abaningi baqala ukwesaba ukwanda elibukhali izindleko ukudla nezinye izinto. Yiqiniso, abathwali kuzokhulisa izindleko, kodwa kancane kuphela. Ngokusho kwemibiko ukuze abahlaziyi, izindleko isilinganiso ezokuthutha kwezimpahla badabula leyo ndawo Russia kuyinto ruble angu-30 ikhilomitha ngalinye. Ukungeza kulokhu ukubaluleka imali esiphezulu - ruble 3,06 - ngizolivusa intengo zokuhamba ngo-% 10 kuphela. Idatha udoti kusuka izindleko sokugcina ukukhiqizwa ngokulandelana 4-10%, hhayi ngaphezulu. Ngakho, ngisho noma siphatheke acabangele esiphezulu ibha izindleko, amanani kwezimpahla aye anda lungene 1%.
Kuleli qophelo endaweni eRussia ezokuthutha izinto ezihlukahlukene ukudla abathintekayo mayelana 8.5% azo zonke izimoto multi-ton. Labo abasele abanga-91,5% bekwi ukuthutha ngobuningi nokwakhiwa impahla emikhunjini. Kulokhu, iningi ukudla athuthwe ku amabanga amancane futhi okomhlatshelo izimoto wosayizi omkhulu.
Ngaphezu kwalokho, kufanele acabangele ethize umnotho Russian iyonke. Abathwali kuleli zwe akunakwenzeka ukuba ngazwi linye ukwamukela emisha kanye ukwandisa yamanani zokuhamba kwabo. Cishe, uzobe ebhekene nomsebenzi okulahlwa futhi unentshiseko "ngomgunyathi" abadlali ngeke baphunyule ukukhokhwa kwezintela. Ngaphezu kwalokho, eside umkhuba wokusebenzisa kwamanye amazwe liyazikhulumela: emazweni aseBaltic, isibonelo, emva kusungulwa inkokhelo eyengeziwe ye-toll emigwaqweni abathwali ozama ukwehlisa yizimpahla, ukuze singalahlekelwa amakhasimende endaweni yokuncintisana.
Izinhlawulo ngokwehluleka ukusebenzisa "uPlato"
Kanyekanye ukwethulwa "uPlato" Imithetho eyenziwe Ikhodi bokuPhatha Amacala we Russian Federation ngokuphindiwe sezithotshiselwe phansi izinguquko eziningi kanye nezingxoxo. Ngokusho uhlelo lwamuva Ikhodi, non-ukuhambisana ku ethula toll emigwaqweni federal abanikazi izimoto nabashayeli yabo iyoba indaba izinhlawulo.
Ukunyakaza kwabantu noma izithunzi isisindo imoto ka amathani angaphezu kuka-12 emigwaqweni inhloso kahulumeni ngaphandle kokukhokha Kwabenza umonakalo akuhileli ukunqunywa ku umshayeli imoto enhle in inani ruble ayizigidi ezinhlanu izikhulu abanomsebenzi ukuhamba izimoto - ngamashumi amane amawaka, osomabhizinisi ngabanye - ruble ayizigidi ezingamashumi amane ku abantu zomthetho - amane namashumi ayisihlanu nezinkulungwane.
Ikhomishana okuphindaphindayo ieala zokuphatha kubangela inhlawulo ruble ayizigidi ezingu 50,000 komunye kulabo abasebenzayo kanye abantu zomthetho ngokulandelana.
Lawa izinhlawulo izidingo abangahambisani nawo. "Platon" eshibhile ukukhokha kuka ukuba ngisindise izwe. Ngokusho uhulumeni wamisa umthetho izinhlawulo kungenzeka akhishwe uma:
Imoto yayiswa okuyiphutha noma inqanyuliwe ugibelile kudivayisi ngaphandle kokukhokha umnikazi umzila kanye opharetha izaziso.
Imoto kufanele kube phezu track ngaphandle idivayisi ugibelile noma i-akhawunti yamanje ayikho imali edingekayo ukukhokha.
Imoto kuphambuka isikhathi noma umzila, ngaphandle kokuba ku-ibhodi kudivayisi futhi ngaphandle ukwazisa opharetha.
imoto ezinyakazayo uyaqhubeka emva ukudedela ukheshe nge-akhawunti yakho yamanje.
Namuhla, uhlelo usebenza kwimodi okuzenzakalelayo. Abashayeli nalapho ehamba endleleni ngeke zihlolwe. Yonke idatha ngokuzenzakalelayo ukufunda kusuka kudivayisi ugibelile noma ekhadini. Isitatimende kusho uhlelo inhlawulo "uPlato" (okungukuthi, siye wathola) kuphela emuva kokuthi amarekhodi kusukela amathuluzi kanye nemifanekiso enezithombe amaphoyisa isiqophi traffic.
Ukuze uqale ukusebenzisa "Platon" uhlelo, umshayeli imoto kufanele ukhiphe idokhumenti ekhethekile - le nebalazwe. Kungenjalo, ungakwazi ukuthenga umshini ibekwe ebhodini imoto. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukufakwa kumadivayisi ozikhethela.
Njalo umnikazi iloli uthola akhawunti yayo siqu, kwaqedwa okwenziwa i-akhawunti yakho ngokusebenzisa ikhadi lasebhange. Ngaphezu kwalokho, ukwenza ku-akhawunti izimali kungaba ngokusebenzisa imishini kokubili uhlelo kanye nabalingani bayo - QIWI noma emahhovisi ezweni. Ngezinye Disemba 2015, kwakunabamemezeli 138 amaphuzu kangaka kungaba kokubili Khokha amakhadi asebhange, nophethiloli ekhethekile, okuvela kulo imali kuhoxiswe ngaphandle ikhomishini.
Ukuze ugweme isiminyaminya phezu ukuhwebelana phakathi kwemingcele wadala office mobile ekhethekile futhi uyazifeza reception yokugibela.
Izimali zisetshenziswa kanjani, okuholela uhlelo
Kungani isimiso "uPlato", kuyini, nokuthi bangaya kuphi ukuze yonke imali ezivela ngesikhathi ukusebenza kwawo? Collection nokusatshalaliswa imali yisibopho Imigwaqo Agency. Kuyinto unesibopho isabelomali ukuthuthukiswa ezifundeni emizileni zwe. Kubandakanya minikelo izonikezwa nozakwethu uhulumeni nezinkampani ezizimele. It is kuhlelwe ukuthi lesi simiso "uPlato" ezokwenzela ngonyaka ruble engaba yizigidi eziyizinkulungwane ezingu-40, futhi leli nani ngeke afeze nokubuyiselwa 90% azo zonke imigwaqo kahulumeni kuleli zwe nge-2019.
Kulindeleke ukuthi zonke izimali isabelomali lesifunda uzobe esichithwa ukuqaliswa izinto ezibaluleke kakhulu, ngoba i-FDA ozokwamukela imibhalo umbiko, ithunyelwa lesifunda Isikhwama endleleni imali yokugibela izinkokhelo kanye inhlawulo. "Platon", sibonga ukuqaliswa kanye ukuheha utshalomali olwengeziwe izosetshenziswa ukusekela nakhe amaphrojekthi lesifunda ngobukhulu. Ngokwesibonelo, e-neSamara region bayokwakha amabhuloho "Frunze", e-Leningrad esifundeni kanye Tver - overpasses, ku Voronezh esifundeni - Umhubhe.
Ministry of Transport we Russian Federation wathi ukuthi izinguquko ezenziwe ku "uPlato" imigwaqo uma sicabangela umsebenzi wokuvuselela izakhiwo zabo okwalandela ngezithukuthuku ukuqhutshwa kuzosiza nokwandisa ukuthuthwa kwezimpahla ezweni lonke futhi kujwayeleke zonke izindawo emnothweni. Izimboni kanye namabhizinisi aqinisekisiwe ukulethwa ngokushesha kwemikhiqizo kunesidingo sokuba ukusebenza ehlelekile futhi ngokushesha.
Imibhikisho ngokumelene "uPlato"
Ukuqala kokusetshenziswa kohlelo kwakuyisiqalo imibhikisho abashayeli bamaloli. Eyokuqala yaqala ukubonakala Angenelisekile ngisho nangaphambi uhlelo wethulwa - ngoNovemba 2015. Perturbation lwathatha izinyanga eziningana, uDisemba. Le mibhikisho kubikwa ukuthi babe ngokumelene izinhlawulo nezinkokhelo eliphezulu kakhulu, kanye ngokumelene yokuthi imiphumela yezezimali "uPlato 'abeqeli esimweni futhi inkampani yangasese.
Abashayeli bamaloli ivinjiwe ngawo emigwaqweni emikhulu nemincane federal, ephumula ukugeleza izimoto ngamabomu. Okudingekayo ukuze "uPlato" sahoxiswa esikhathini esizayo esiseduze, e Perm yaphenduka isinyathelo, phakathi kwesikhathi lapho abashayeli namaloli zikleliswe ikholomu futhi zayiswa ngesivinini 40 km / h, okwakuyigama imbangela isiminyaminya ku amakhilomitha ayisithupha ubude. Ngo beltway Ekaterinburg kwaba nesimo esifanayo: abashayeli 200 Fur eqoqwe ngesivalo 10 amakhilomitha. Esikhathini Tver esifundeni imibhikisho wathatha uhlamvu edabukisayo: isixuku yagijimela ukuba ugandaganda-trailer. Ngenxa yalokho yengozi kwashona umuntu oyedwa, kwathi amathathu esibhedlela.
Ngakho-ke, ukugxekwa okunjalo eqotho uhlelo, "uPlato", izibuyekezo ngakho uhlamvu hhayi ezithophayo kakhulu ongemuhle ekwenzeni lokho okuhleliwe. Abashayeli bamaloli babekholelwa ukuthi uhlelo kakhulu "ongahluziwe" futhi oyiphutha wokuthi yethulwa okufanele kwenzeke ngayo eminyakeni embalwa nje emva bedlula izivivinyo ezithile.
Umbhikisho ngobukhulu ezinamazwi ezifana "uPlato" - kukhanselwe "owawuse e Dagestan: endleleni ukuqoqa abantu abangaphezu kuka-17 eziyinkulungwane, futhi abezindaba endawo abika ukuthi amaloli wezimpahla isingamakhilomitha 57 amakhilomitha ngoNovemba 2015, ababambiqhaza, sesatshiswa yokuthi imashi lizoqhubeka !. Moscow, abaningi kuzo kusuka 16 nezinye izifunda zezwe. ekuqaleni kuka-December izimoto ngakwazi ukubona kancane ivinjelwe eMoscow, okuyinto for ukuhamba izimoto kwesokunxele kwindlela eyodwa kuphela. Khona-ke, ngo-kupakwa Sekutsenga ekamu iloli "-Khimki Mega" kwahlelwa Coto d bilan kwakukhona abantu abangaphezu kuka-40 namaveni.
Imibhikisho Unike amandla abashayeli bamaloli ukunciphisa yamanani: I-Ministry of Transport ivumile setha izimali ezintsha - ekhokhwa ikhilomitha ruble 1.53 esikhundleni 3,73 ngalinye, futhi okwesikhashana ukukhulula nabashayeli nempahla ekukhokheni inhlawulo. Ngo-December ngonyaka owedlule, umongameli wezwe wayala wathi "uPlato" is okungazange kukhanselwe, kodwa unxuse abasemagunyeni ukukhulula izintela iloli.
Analogs kohlelo kwamanye amazwe
Izinhlelo ezifanayo Russian "uPlato", isebenze kwamanye amazwe amaningi. Ngokwesibonelo, eJalimane, opharetha njalo kwesimiso esinjalo iyona Toll inkampani Ukuqoqa: amaloli nesisindo esingaphezu kwamathani phezu 7.5 lizokhokhiswa, futhi leyo mali kuxhomeke ezingeni kwekhabhoni ku imvelo kanye enama-asi imoto futhi kuhluka amasenti ikhilomitha ngalinye 8 kuya ku-22. Inkokhelo yenziwe noma ngokukhetha indlela ethile, noma ngokusebenzisa on-ebhodini instrumentation.
E-Austria, imali icala nguhulumeni ASFiNAG. Ukuze ikhilomitha elilodwa of abashayeli bamaloli umgwaqo akhokhe amasenti 15 kuya 44. Ngonyaka odlule, le nkampani izimali abangaba yizigidi ezingu-500 euro nokwakhiwa kwemigwaqo emisha futhi cishe abayizigidi ezingu 485 kabusha emidala. Toll Qoqa ASFiNAG futhi ngo-2010 wasungula uhlelo kwethulwa TOLL2GO, okuyinto senzelwe labo bophezela izindiza e nempahla kusuka kwelinye izwe.
Analogue "uPlato" e-Slovakia engaphansi kokulawula SkyToll inkampani: izinkokhelo ekhokhwa izimoto ezithwala izimpahla nesisindo esingaphezu kwamathani ayizigidi 3.5, kodwa i-scope zalesi simiso embozwe kuphela amathrekhi ezithile kuleli zwe. Ngo ikhilomitha elilodwa Imali umgwaqo kusukela amasenti 9 kuya ku-24 futhi kuncike ukulandelwa kwezilinganiso kwemvelo kanye nesisindo imoto.
Ingabe kukhethwa concessionaire esemthethweni hlelo?
Amandla kwakubacasula nje amanani kuphela okusezingeni eliphezulu futhi ukutholakala intela imoto, kodwa futhi inkampani-concessionaire, ababekhethwa ukwakha imvume ngaphandle ithenda.
Ekuqaleni, uhulumeni ngo-August 2013 imemezele umncintiswano ngokubamba iqhaza lapho izinkampani Bekulindeleke ukuba amakhono okuthile emkhakheni wokwakha nhlelo ezinjalo. isigaba olwandulelayo senzeka izinkampani ezintathu kuphela, ngamunye eyayintula iqhaza bakwamanye amazwe, njengoba izinkampani zakwamanye amazwe kuphela isipiliyoni esifanele.
Inhloko "Technologies Russian", opharetha uhlelo "Platon" Sergei Chemezov, emva kusungulwa unswinyo ngo-2014 uye ehlongozwayo ukuze senqabele kokuhlangenwe nakho angaphandle kumiswa uhlelo, athembele ngokugcwele isofthiwe Russian. UHulumeni wavumelana isiphakamiso futhi ukhansele ithenda. abameli abaningi bakhuluma kabi, ngoba isinqumo kubhekwe ayilungile, ngoba leli cala "uPlato" akufakwanga uhlu okungaphandle komthetho "Ngo nerhasi Izivumelwano", lapho ungenza ngaphandle mncintiswano.
Ngokombono wezomthetho buka, kukhona enye inkinga, ngokuyisisekelo okuyinto yangempela yokuthi umthetho Russian sibhekisela kuphela scheme, owawuthi concessionaire uzokhokha imali kahulumeni ngoba ilungelo lokusebenzisa into yesivumelwano, okuyinto sonke isimiso "uPlato" nezinye izinto.
Uma sikubeka kalula, opharetha liyadingeka ukukhokha isimo imali ukuze bathole ilungelo bazokhokhisa imali kubashayeli bamaloli. Naphezu kwalokhu isimo inkampani uqobo okhokhela ethile. Abantu abaningi abasebenzisa i ukuxhumana nomphakathi, futhi abashayeli bamaloli waphikisana yokuthi RTITS hhayi kuphela iqoqa imali abashayeli, kodwa futhi bawathola isimo.
Nokho, yonke imali inkampani okuthunyelwa isabelomali isimo. Ngaphezu kwalokho, umthetho wezwe ihlinzeka ngendlela yokuba isivumelwano yokunivumela, okuyinto has a iphuzu futhi mayelana nesimo ekukhokhweni grantor. Ngokwalesi simiso, futhi lonke uhlelo imisebenzi, "uPlato." Okusho lonke indlela wukuthi lo concessionaire ngezindleko zayo oziphakamisa yonke ingqalasizinda, okuyinto yabe kwelifa loonyana uhulumeni, okuyinto okhokhela lo concessionaire ethile ukuze kwakhiwe ingqalasizinda.
Athutha esiqandisini enqoleni: izinhlobo nosayizi
Amaloli Special umlilo: isiqu, izici lobuchwepheshe
Nosimende usimende-isihlabathi sibe wokwakha izitini